उपराष्ट्रपतिको स्वागतका लागि चर्को घाममा विद्यार्थी, काम गरेको ज्याला माग्दा रडले कुटिए ! (भिडियो) « News24 : Premium News Channel
उपराष्ट्रपतिको स्वागतका लागि चर्को घाममा विद्यार्थी, काम गरेको ज्याला माग्दा रडले कुटिए ! (भिडियो)
काठमाडौं । न्युज २४ टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम ‘सीधाकुरा जनतासँग’को आज ३७९ औं एपिसोड हो । कार्यक्रमको आजको एपिसोडमा पनि विभिन्न विषयमा रिपोर्टहरु प्रस्तुत गरिएको छ ।
१. उपराष्ट्रपतिलाई स्वागत गर्न चर्काे घाममा विद्यार्थीलाई घण्टौ लाइनमा राखियो
रौतहट । रौतहटको कटहरियामा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको स्वागत गर्न कटहरिया नगरपालिकाले २३ विद्यालयका सयौं विद्यार्थीलाई घण्टौ चर्कोमा घाममा राखेको छ । मंगलबार कटहरिया नगरपालिकाले आयोजना गरेको जानकी जयन्ती समारोहमा नगर शिक्षा शाखाले विद्यालयको ब्यानरसहित विद्यार्थी शिक्षकलाई अनिवार्य उपस्थित हुन उर्दी जारी गरेको थियो । यही कारण कटहरिया नगरपालिकामा रहेको संस्थागत तथा सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी उपराष्ट्रपति पुनको स्वागतका लागि घण्टौ घाममा बस्नु परेको थियो ।
२. रौतहटमा विद्युत चोरी प्रकरणः प्राधिकरणले सुरु ग–यो ‘सर्च अपरेशन’
रौतहट । रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिकामा विद्युत चोरी गर्नेहरु समाउन विरुद्ध विद्युत प्राधिकरणले अभियाननै सञ्चालन गरेको छ । प्रहरीलाई साथमा लिएर विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीहरुले तारबाट हुक गरिएका सबै ठाउँहरुका तार र मोटर कब्जामा लिइरहेको छ । यस अघि रौतहटको अधिकांश सरकारी कार्यालयहरुमा चारेर बिजुली प्रयोग गर्ने गरेको देखाएका थियौ । स्कुल, प्रहरी, स्वास्थ्य चोकी, वडा कार्यालय सबै तिर चोरीकै बिजुली प्रयोग भइरहेको थियो ।
३. नक्कली मेनपावर खडा गरी युरोप लग्ने भन्दै लाखौं ठगी !
काठमाडौं । युरोप जाने सपनामा भेरी ओभरसिस नाम गरेको मेनपवारमा लाखाँै बुझाएको २ सय भन्दा धेरै युवाको लाखाँैँ डुबेको छ । सिनामंगलमा रहेको भेरी ओभरसिज नामक मेनपावमा आँफूलाई निर्देशक बताउने बाबु राजा सिग्देलले गगन प्याकुरेल, चुणामणी सिग्देल, नवराज घिमिरे लगाएतका युवाबाट ५० हजारदेखि ६ लाख ५० हजारसम्म लिएर फरार भएका छन् । उनीहरुलाई अफगानस्थान, चेक रिपब्लिक, माल्टा, पोल्याण्ड तथा लिवियामा कामदार भिषामा पठाउने भन्दै सिग्देले पैसा लिएका थिए ।